XOG: Shacabka Muqdisho oo dhibane u noqday DF & Al-Shabaab iyo Xaalad cakiran oo ka taagan magaalada – War La Helaa Talo La Helaa
Shacabka magaalada Muqdisho ayaa wal-wal iyo baqdin xooggan ka muujinaya xaaladda amni daro iyo is-risaaseynta Ciidamada Dowladda Federaalka ee maalmihii u dambeeyay ku soo badanaya magaalada.
Dilalka qorsheysan ay geysanayaan Kooxaha hubeysan ee aan heybtooda la garaneyn iyo askarta Dowladda oo Shacabkii leynaya ayaa joogta noqday,waxayna arrintaan cabsi ku abuurtay Shacabka magaalada Muqdisho.
Adkeynta amniga Muqdisho iyo dhagxaanta lagu jaray wadooyinka ayaa sababay iney isku dhacaan Ciidamada Dowladda Federaalka gara ahaan Ciidamada Militariga iyo kuwa Booliska,kuwaasi oo labadii maalin ee u dambeeyay ku dagaalamay qeybo ka mid ah degmooyinka Muqdisho.
Ciidamada Booliska ayaa diiday iney Ciidamo hubeysan oo aan Boolis ahayn ka gudbaan baraha Kontarool ay joogaan,waxayna taas keentay in Ciidamada Militariga oo aad u hubeysan ka biyo diidaan dagaalna la galaan.
Is-risaaseynta Labadan Ciidan ayaa sababta iney waxyeelo ka soo gaarto dad shacab ah oo iyagoo bad qaba ka soo baxay guryahooda.
Shacabka magaalada Muqdisho ayaa noqday dherigii labada dhinac ka gubtay,waxayna dhibane u yihiin Dowladda Federaalka iyo Kooxda Al-Shabaab oo dalka isku haaya.
Xildhibaan Mahad Salaad oo shaaciyay ciidamo cusub oo aan la aqoon ay dhibaato ka wadaan Muqdisho